China ilebula le-nude lip isicwebezeli sangasese ngokwezifiso i-nude glossy lipgloss vegan nesihluku samahhala se-nude lip glosses ifektri nabaphakeli | Ubuhle be-Iris
Ilebhu elizimele elicwebezelayo elebula langokwezifiso linqunu elicwebezelayo lipgloss vegan nesihluku samahhala sezindebe ezinqunu
I-Vegan & Cruelty free non-sticky lip gloss, ngokushelela nangokucwebezelayo. Izinyembezi zithambisa izindebe ngamavithamini kanye nebhotela le-Shea.
Intengo ye-EXW: US $ 0.99 - 2.99 / Ucezu
Min.Order Ubuningi: 3000 Piece / Pieces
OEM. I-ODM: Iyatholakala
Umkhiqizo Dukubhalwa phansi:
I-lip gloss yethu ayi-Vegan & Cruelty free, inokuthambile kweSoft, ayinamathele ezindebeni, i-Moist futhi iyakhazimula.
Le gloss lip icebile ku-Vitamin E wemvelo, ovikela kahle izindebe, wakhe ifilimu evikelayo yezindebe, evimbela ukulahleka komswakama, unciphise imigqa emihle nezindebe ezomile nokuxebuka. Buyisela isicwebezelisi sezindebe, wenze izindebe zithambe futhi zibe bushelelezi, futhi uzizwe ugcwele umswakama.
Kufanele imibuthano yomndeni noma yabangane, imibukiso yemfashini, ukusetshenziswa kwansuku zonke njalonjalo. Usayizi ophathekayo ukuvumela ukuthi wenze izindebe zakho zibe zinhle noma kunini, noma kuphi. Imibala ehlukahlukene engama-65 engahlanganiswa kalula nezitayela ezahlukahlukene zokwenza izimonyo, izikhathi namathoni esikhumba.
Igama lento Ukucwebezela izindebe
5.Iqukethe amavithamini / Shea ibhotela
Ukupakisha Ama-1 ama-PC ebhokisini lombala wokuklama
IMP: okokuqala, masazise imfuneko sakho maqondana nezinto, khona-ke sizonikeza isiphakamiso ngokufanele futhi sinikeze nekhotheshini, inani esinalo linemibala engama-65 yelip gloss yethu. Lapho yonke imininingwane iqinisekisa ingathumela amasampula. Izindleko zesampula zizobuyiselwa imali uma kufakwa i-oda.
Langaphambilini I-lipgloss ethengisa ngokwezifiso i-lip gloss ilebula langasese le-lipgloss e -iy
Olandelayo: wholesale lip stick stick custom logo vegan velvet lip stick stick private label lipstick low moq makeup lip stick
lipgloss ecwebezelayo ecwebezelayo
umenzi wezindebe zomlomo
inkambiso yomthengisi we-lip gloss
inkambiso yomthengisi we-lipgloss
lipgloss wholesale akukho ilebula yangasese
ilebula langasese le-lip plumper
acwebezelayo lip isicwebezelisi
shimmer lip isicwebezelisi ilebula yangasese
Sula lip isicwebezelisi ilebula yangasese wholesale l ecacile ...
ngokwezifiso lip isicwebezelisi yangasese ilebula bezinto lip glos ...
Glossy lipgloss lipgloss shiny wholesale no lab ...
Lip isicwebezelisi umthengisi ngokwezifiso acwazimulayo lip isicwebezelisi priva ...
wholesale lipgloss ngokwezifiso logo sombala lip glos ...
wholesale lip isicwebezelisi OEM ngokwezifiso logo yakho pr ...